Gbasara Anyị | Yunke China Information Technology Limited
Banyere Digital China (Isi ụlọ ọrụ) Otu
Digital China (rentlọ ọrụ nne na nna) Group Co., Ltd. (koodu nchekwa: 000034.SZ).
Afọ iri abụọ gara aga agbaala àmà na anyị na-ebute ụzọ na ọrụ ndị jikọrọ ọnụ na China. Site na usoro eco na-ekpuchi ndị mmekọ 30,000, anyị enyela ọtụtụ nde ụlọ ọrụ na ọtụtụ narị nde ndị ahịa ngwaahịa ngwaahịa IT, ngwọta na ọrụ.
N'oge nke "igwe ojii + nnukwu data", anyị ga-anọgidesi ike na ebumnuche anyị, wulite na ike ma gbalịsie ike bụrụ onye na-eweta ọrụ igwe ojii na-eweta ọrụ na onye nwere ike maka mgbanwe azụmahịa.
Banyere Digital China Group (nne na nna ụlọ ọrụ)
Yunke China Information Technology Limited (Aha mbụ dị ka DIGITAL CHINA (rentlọ ọrụ nne na nna) NETWORKS LIMITED, DCN maka nkenke), dị ka enyemaka nke Digital China (Parent company) Group (Stock Stock: SZ000034), bụ onye na-eduga ihe ọmụma nkwukọrịta data na ihe ngwọta. Site na Lenovo, DCN ka emepere n'ime ahịa netwọkụ na 1997 na nkà ihe ọmụma ụlọ ọrụ nke "Ndị ahịa dabere na ya, Nchọpụta Teknụzụ na Ọrụ Mmasị".
DCN na-elekwasị anya na mpaghara nkwukọrịta data na ahịrị ngwaahịa zuru ezu, gụnyere Gbanwee, Ikuku, Router, Security, na Cloud ọrụ. Site n'ịnọgide na-etinye ego na RD, DCN bụ onye na - eweta ihe enyemaka IPv6, ụlọ ọrụ China mbụ meriri asambodo IPv6 Ready Gold na onye nrụpụta izizi merie OpenFlow v1.3 Asambodo.
DCN enyelarị ngwaahịa na azịza na mpaghara China niile na mba 50 n'ụwa niile, guzobere ahịa na ọrụ ọrụ na Europe, America, Russia, CIS, Ndịda Ebe Ọwụwa Anyanwụ Eshia na Middle East. DCN na-enyere ndị ahịa aka nke ọma site na Mmụta, Gọọmentị, ndị ọrụ, ISP, ndị agha, na ụlọ ọrụ.